Iindawo zeefowuni zakho zokuSebenza | Martech Zone
Sisoloko sivavanya iiCalls to Action kwiindawo zethu nakubathengi bethu. Oku kunokuba sisikhundla sokuqala, kodwa kukho iindawo ezininzi zokubonelela ngendlela yokuzibandakanya kwiwebhusayithi eqhelekileyo. Ndingazikhuthaza iinkampani ukuba zicwangcise ezi ndawo kwimixholo yazo yolawulo lomxholo ukwenza ukuba kube lula kumashishini ukongeza, ukuhlaziya kunye nokuvavanya iifowuni zokwenza okuthile. Iindawo ze-CTA kwindawo yakho:
Indawo ebanzi -Ukuba nendawo engaguqukiyo ukusuka kwiphepha ukuya kwiphepha apho umsebenzisi anokulindela ukubona umnxeba kwisenzo kubalulekile. Le inokuba yiphaneli kwiphepha liphela, isilayidi esisezantsi / iphaneli ephezulu (kufana nepaneli yokubhalisela), okanye i-popover div. Phuma Ipiyano kwiFlash kwaye uza kubona iphaneli ngaphezulu kweenyawo ngapha kwesi siza Bhalisa namhlanje.
Eyona nto -Abantu baskena amaphepha kwipateni ye-F ukusuka ekhohlo ukuya ekunene. I-CTA esecaleni yindlela elungileyo yokufaka umbono wabantu njengoko befunda emgceni nomxholo wephepha. Amanqaku ebhonasi ukuba ungagcina umnxeba wentsebenzo onxulumene nomxholo uqobo. Sibeka ii-CTAs kwi-bar yethu esecaleni kwaye zipapashwa ngamandla ngokuxhomekeke kwinqanaba leposi elishicilelwe kulo.
Kumsinga -Kuphazamisa ngakumbi, kodwa ukubeka umnxeba kwisenzo ngaphakathi komxholo wakho, nokuba kungamakhonkco, iqhosha okanye i-CTA, unokuqinisekisa ukuba uyabonwa. Uninzi lweenkqubo zolawulo lokuqukethwe ziya kukuvumela ukuba ucofe umxholo wakho, ukuze wongeze umnxeba wenzele iithegi zomhlathi ezimbalwa ngaphakathi okanye ngaphambili / emva komxholo wephepha lakho.
Qiniseka ukuba ufunda ngakumbi kwi ukuqonda ubeko lwe-F kwiiWebdesigntuts +:
Sizibonile iziphumo ezimangalisayo kwipaneli yokubhalisela ezantsi ezantsi Martech Zone. it yenza ngcono ngaphezulu kwe-400% Kunomnxeba wethu wokungena kumjelo osisenzo kwizithuba zethu. Ndiqinisekile ukuba lukhona utshintsho esinokuluvavanya ukuphucula iziphumo, kodwa idatha yokuqala ibonelela ngedatha yokuba siphazamisa ngakumbi, iziphumo zibangcono. Sikholisa ukuthembela ngokuchaseneyo nolu qheliselo kuba asifuni kulahla abaphulaphuli bethu kuba sibetha iintengiso kuyo yonke indawo… kodwa kufanelekile ukuba sikhankanye.
tags: umnxeba kwisenzobiza indawo yokusebenzactaukulandela ilisof uyilokumsinga womnxeba ukuya kwizenzoemgceni iintengisoindawo yokuhlala ibizelwe kwizenzo
Oktobha 10, 2013 ngo-8: 29 PM
yeyiphi iplagi oyisebenzisileyo ukufumana ibar ye-optin phezulu kakhulu kwibhlog?
Okt 15, 2013 ngexesha 9:33 AM